Tavoahangy Divay Aroma dia mamorona ny mombamomba ny sarin'ny mpanangom-bokatra Gabriel Meffre izay mankalaza 80 taona. Izahay dia niasa tamin'ny famolavolana mampiavaka ny vanim-potoana 30 amin'ny vanimpotoana, tandindon'ny vehivavy iray izay vera misy divay. Ny takelaka loko ampiasaina dia namboarina amin'ny fitrandrahana sy fanaingoana foil mba hampisehoana ny sisin'ny mpanangom-bokatra.
Ny Fonosana Sakafo
Ny Fonosana Sakafo Ny fanamby amin'ny fanatanterahana ny fonosana marika an'ny marika BCBG dia ny fanatanterahana andiana fonosana iray mifanaraka tsara amin'ny tontolon'ny marika. Ny packagings dia tokony ho minimalist sy maoderina, raha manana io kofehy artisanal io amin'ny crisps sy ny lafiny mahafinaritra sy mampientam-po izay mitondra ireo tarehin-tsoratra voasintona amin'ny penina. Ny aperitif dia fotoana tsy ampoizina izay tokony hahatsapa amin'ny fonosana.
Tohatra Ny tohatra UVine dia miforona amin'ny alàlan'ny mombamomba ny boaty boaty misy endrika U sy V amin'ny endrika hafa. Amin'izany fomba izany, ny tohatra dia lasa manohana tena satria tsy mila ivon-afovoany na fanohanana perimeter. Amin'ny alàlan'ny firafitry modular sy feno azy, ny famolavolana dia mitondra fahatsorana mandritra ny fanamboarana, fonosana, fitaterana ary fametrahana.
Alakamisy 12 Mey 2022
Talata 10 Mey 2022
Tavoahangy Divay Ny Fonosana Sakafo Tohatra Tohatra Efitrano Fanalahidy Hazo-E-Hazo